हालसम्म ‘सञ्जु’ को कमाइ कति ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
हालसम्म ‘सञ्जु’ को कमाइ कति ? हेर्नुस्
एजेन्सी । सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘सञ्जु’ ले यतिबेला भारतीय बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाइ गरिरहेको छ। रणवीर कपुरले अभिनय गरेको यो फिल्म रिलिज भएको ११ दिन भइसक्दा पनि भारतका साथै विश्वभरमा व्यापार उत्कृष्ट गरेको हो ।
११ दिनमा भारतीय बक्स अफिसमा मात्रै ‘सञ्जु’ दुई सय ७१ करोड भारु कमाइसकेको छ। दर्शकका साथै समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको ‘सञ्जु’ ले रिलिजको दिन ३४ करोड ७५ लाख बटुल्दै २०१८ मा आएका बलिउड फिल्महरुमध्ये ओपनिङमा सबैभन्दा ठूलो कलेक्सन गर्ने कीर्तिमान बनाएको थियो।
फिल्मले भारतमा मात्रै पहिलो सातामै दुई सय करोड रुपैयाँ व्यापार गर्‍यो, जबकि दोस्रो सप्ताहन्तमा ६१ करोड ७५ लाख बटुल्यो। अहिलेको व्यापार हेर्दा ‘सञ्जु’ले दोस्रो साता ९३.९४ करोडको व्यापार गर्ने अनुमान गरिएको छ।
बलिउडका व्यापार विश्लेषकका अनुसार, बक्स अफिसमा अहिलेकै रफ्तार कायम रहे फिल्मले ३ सय करोड सजिलै कमाउने छ। राजकुमार हिरानीको निर्देशनमा बनेको ‘सञ्जु’ को बजेट करिब एक सय करोड रहेको बताइन्छ। भारतीय बक्स अफिसका साथै विश्वभरको कमाइ जोड्दा १० दिनमा फिल्मले ४ सय ४५ करोड भारु कमाएको छ।
ट्याग्स: कमाइ, सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘सञ्जु’, सञ्जु